Maqaalkan waxa uu maskaxdeyda ku soo dhacay maalin aan ka qeybgalay munaasabad marwooyin soomaaliyeed ay soo qaban qaabiyeen , taasoo looga hadlayay qarash ay u soo uruuriyeen masjid laga dhisayay Muqdisho.
Waxaa hubaal ah in maalmahaan uu aad u socdo dhaq dhaqaaqa marwooyinka Soomaaliyeed ay ku saacidayaan dadka liita , siia dumarka jooga qurbaha .
Mar aan u kuurgalay arrintan oo baaritaan dheer aan ku sameeyay waxtarka haweenka ayaa waxaan ku ogaaay lacagaha laga soo diro dibadda ay 80% ay soo diraan haweenka , waayo haweenka aad bey uga jilicsan yihiin ragga .
Oday aan deris nahay ayaa waxaa dibadda u jira shan wiil iyo hal gabar , markastoo aan arka waxay ishedu qabataa isagoo si gaar ah ugu duceynaya gabadha , sababta mar aan weydiiyay wuxuu ii sheegay in gabdhiisa ay tahay mid xaaladiisa si gaar ah uga warqabta oo uga fikirta , waxaana uu sheegay in bil waliba 30-keeda looga yeero shirkadaha xawaaladaha midkood oo uu halkaasi ka qaato biilka lacageed ee ay soo dirto , balse wiilasha ay lacagta soo gaarsiiyaan bil waliba 10-keeda , iyagoo isku weydaarinaya qaab dirista lacagta oo mid mid uu bil waliba u soo diro .
Odayga ayaa waxa uu yiri “ gabar iyo wiil maxaa isku dhow , allah ii dhaafo gabadheyda” sidaa ayuu hadalkiisa ku soo gunaanaday .
Arrintan ayaa waxaad ku ogaan kartaa waxtar-ka dumarka , waayo shan wiil ayaa hal gabar uga wanaagsanaatay aabihii wada dhalay , kadib markii ay kasbatay ducadiisa , soona jiidatay , waxaana odayga uu u duceeyaa maalin waliba gabadhiisa .
Marwooy waxaad mudan tahay inaan ku amaano.
Waayo dalkeena burburay 19-kii sano ee ugu dambeeyay , ragga waxba maaney qaban , haweenkuna waxay noqdeen tiirkii nolosha iyo udub dhexaadkii qoyska , hadaba sow ma mudan in maamooyinka loo mahad-celiyo “ Haa” wey mudan tahay .
Imisa jeer ayaad aragtay tabarucaad ama samafal loogu deeqay dadka ku barakacay duleed-ka magaalada Muqdisho oo haweenka ay hormuud ka yihiin ha joogeen dal ama dibad , laguma soo koobi karo qoraal ficilada fiic fiican ee ay qabtaan hooyooyinka soomaaliyeed “Hooyadu waa lama huraan” , si kastaba arrini ha ahaatee waxaa qof kastaba u muuqan kara dadaalka weyn ee ay ka geystaan samafalka iyo dib u dhiska dalka Soomaaliya .
Runtii Haweenka Soomaaliyeed ee qurba jooga ah waa ay isa soo uruursadaan si ay uga dhimriyaan dhibta dalkooda iyo dadkooa heysta , una gurmadaan wixii ay heli karaan, waxayna ka fikiraan sidii allah ugu soo dabaali lahaa dalkooda Soomaaliyeed nabad , horumar iyo dowlad loo dhan yahay .
Inkastoo arrimaha siyaasadda aaney faragelin haweena-ka Soomaaliyeed oo aaney noqon dadkii faraha dhiigga ku yeeshay ayaa waxay noqdeen kuwa u taagan samatabixinta qoysas badan oo ku dhawaaday inay gaajo u dhintaan markii aabayaasha mas’uuliyadda qoyska ka saarnaa ay wada noqdeen kuwa gabay shaqada oo fadhiid ah sababo dagaalada weli ka soconaya dalka Soomaaliya .
Haweenka Soomaaliyeed ayaa xiliga ay ka talo dhiibtaan siyaasadda murugsan ee Soomaaliya aaney dheg jalaq u siin siyaasiyiinta iyo kooxaha dirirsan oo isaga sii mashquula colaada dhexdooda u dhaxeysa.
Qorshaha haweenka ee u damqashada dadka saboolka ah ayaa ah mid aad loo xusi karo oo aaney quluubta dadka Soomaalida ah iloobi doonin.
Ugu dambeyntii marwooyinka soomaaliyeedow dadaalkiina sii wada , allah ha idin abaal gudee , waa sidii hanuuniye ku heesay “maamooy dhib baad iga soo martay , mudankaaga janno mowla haka dhigo” aamin yaa rabi .
Waxaana ku soo gaba-gabeynayaa qormadeyda mahadsanid marwo.
Qormadan waxaa qalinka u qaatay :
Asad Abuukar Cali (Asad Yare)
Email : asadyarencc@hotmail.com